Uwe agbamakwụkwọ Miranda Kerr ghọrọ ihe ngosi nke nnukwu ụlọ ngosi Dior House na Australia
Ụbọchị ole na ole gara aga na Australia, National Gallery nke Victoria mepere ihe ngosi na-akpali mmasị. N'ụlọ Dior ejiji ya, e nyere uwe dị iche iche, nke o kere n'ime iri afọ asaa gara aga. A kpọrọ aha ahụ bụ House of Dior: Afọ iri asaa nke Haute Couture, ọ na-enwekwa ike ịchọta ọtụtụ ndị na-agbanyere akara a, n'ihi na uwe ndị ahụ akọwapụtara abụghị naanị ihe dị mkpa, kamakwa ihe dị mkpa gbasara onye pụtara na ha na ihe dị iche iche. Ọnụ ọgụgụ kasị ukwuu nke ndị gbakọtara gburugburu ya bụ ejiji agbamakwụkwọ nke akụkọ a ma ama nke Miranda Kerr, bụ onye lụrụ nwunye Evan Spiegel n'oge na-adịbeghị anya.
Miranda Kerr na Evan Spiegel
Miranda gwara banyere ejiji ya
Agbamakwụkwọ na Kerr bịara na ngosi ahụ n'ụlọ Dior na arịrịọ nke Maria Gracia Cury, onye kere a magburu onwe ya. Onye na-emepụta uwe ahụ wee nwee ike ijikọta nkà na ọkaibe na ejiji. Otú ọ dị, e mechiri uwe ahụ, nke mere ka e dokwuo anya na ọ bụ Miranda. Iji mepụta uwe agbamakwụkwọ Maria jiri organza, silk mikado na taffeta. Tụkwasị na nke ahụ, a na-eji ejiji ndị nwere aka na-eji ejiji ejiji, nke yiri alaka osisi lili nke ndagwurugwu ahụ. N'agbanyeghị, a pụrụ ịhụ ihe ndị dị otú ahụ na fatịlaịza Kerr, bụ nke na-achọ isi ya, ma mee ya dị ka ihe osise nke Miranda si dị.
Maria Grazia Curie na Miranda Kerr
N'ajụjụ ọnụ maka magazin a na-ahụ maka egwu, nwanyị ahụ na-alụ ọhụrụ gosipụtara ejiji agbamakwụkwọ ya:
"N'ihi eziokwu ahụ bụ na m nọ na-arụ ọrụ n'ime ụwa ejiji ogologo oge, M gbalịrị onwe m ọtụtụ uwe dị iche iche. Ọ dị ka ihe ndị na-eme ihe, na uwe agbamakwụkwọ, ma ha niile kwuru okwu n'ezoghị ọnụ, m ga-asị ọbụna n'efu na anụ ọhịa. Ugbu a, m na-ebi ndu site na ụkpụrụ ndị ọzọ. Enwere m njide na ịdị umeala n'obi, nke ejikọtara ya na ịma mma. Uwe m na ejiji na-enwe ugbu a mmetụta nke ụmụ nwanyị a ma ama nke afọ gara aga: Audrey Hepburn, Grace Kelly na, n'ezie, nne nne m. Mgbe m lere anya na ya, obi m jupụtara n'ọmasị, n'ihi na ọbụna na 80, ọ na-ese zuru oke. Mgbe nne nne na-ahapụ n'okporo ámá na ya, ọ ga-enwe ike ịhụ uwe-acha ọcha na-acha ọcha na snow, ọ bụla a na-achọ ịchafụ na ọ bụ akpụkpọ ụkwụ dị ala. Uwe agbamakwụkwọ m yiri ụdị ya, ma enweghị m ike iche na ọ ga-adịrị m mma. Enwere m ike banyere ejiji agbamakwụkwọ m ma dịrị m njikere isoro ya mara oke mma na obi ụtọ. "
Agbamakwụkwọ site na Miranda Kerr na Dior ngosi na Melbourne
Miranda Kerr kwuru banyere mmetụta uche n'oge ime, obi ụtọ ezinụlọ na ụdị di ya
Miranda Kerr na Evan Spiegel ghọrọ ndị nne na nna
A foto nke ụbọchị: A nnọọ ime Miranda Kerr na a ije
Na ngosi ahụ ị pụrụ ịhụ ọtụtụ mgbanwe
Igosi ihe ulo nke Dior na Melbourne ga - agwu ruo November 7. Na mgbakwunye na ejiji agbamakwụkwọ nke Miranda, ị nwere ike ịhụ ọtụtụ ihe ndị ọzọ na-akpali mmasị na-egosipụta n'ebe a. Dịka ọmụmaatụ, ndị na-ege ntị ga-eji ejiji site na Nicole Kidman, nke onye omeeji gosipụtara onye ọ bụla na teepu uhie "Oscar" na 1997. Tụkwasị na nke ahụ, ndị nleta na ngosi ahụ ga-enwe ike ịnụ ụtọ ihe ndị Curie, nke e kere maka Jennifer Lawrence, Charlize Theron, Naomi Watts na Marion Cotillard.
Ihe ngosi Ụlọ nke Dior iri asaa afọ nke Haute Couture
Blake Lively na Katy Perry gwara na Intanet ihe mere ha ji baa na "Women's March"
Blake Lively nọ na-eche echiche maka ịbịara ya?
Di na di na nwunye Gwyneth Paltrow nwere nri ụtụtụ
Salma Hayek gosipụtara nchara nke nke anọ n'enweghị ihere!
Ihu nke Burberry ika bụ nwa Juda Iwu
Na-agbachitere Johnny Depp ga-agba akaebe nye mmadụ iri abụọ na anọ
Bree Larson na Oscar-2016
Kate Hudson gara na-acha uhie uhie na akwa isi
Mkparịta ụka n'etiti Rita Ora na Krislian Rodriguez: ịbọ ọbọ ụmụ nwanyị enweghi oke iwu!
Beckham bụ onye na-ejide onwe ya banyere ya na onye njikwa Bieber ma jiri ụbụ abụ ya
Mma nke ịma mma nke Kendall Jenner bụ obi abụọ
Vito Schnabel, enyi nwoke nwoke bụ Heidi Klum, kwuru okwu na nsusu ọnụ miri emi na onye ala ọzọ
Onyeisi Philip nọ n'ụlọ ọgwụ
Mmanụ flaxseed n'oge ime
Blue na Psychology
Black Suede akpụkpọ ụkwụ
Nri nri na mgbidi
Kedu ihe ga-eyi maka Afọ Ọhụrụ 2013?
Alaskan Malamute - agwa
Pattaya ma ọ bụ Phuket - nke ka mma?
Kedu esi eme nkwụ nke karama?
Karịa ịhazi mgbidi site na ịkpụzi?
Ihe nkịta anyị mere karịa anyị
Krismas na Europe - ebe aga?
Akpụ aka na aka aka gị
Backgammon - iwu nke egwuregwu maka ndị na-amalite
Ọrịa nke rabbits na ọgwụgwọ ha
Ndụ onwe onye Kristen Stewart juputara n'omume: nwa agbọghọ ọhụrụ na kụrụ ikpere n'ala
Egwú egwu na akwa
Ntuziaka maka kuki ndị mkpirisi